Previous Article Ụlọọrụ NAFDAC Emebiela Ọgwụ Adịgboroja Karịrị Ijeri Naira Atọ
Next Article Ọñụ Adaa Dịka A Gbapere Ụlọ Ahụike Ọhụụ n'Ụmụdiọka
Igbo sị na ọ na-adị mma onye chezọọ, e chetere ya, ma sịkwa na onye a gwara agwa, ma ọ nụghị anụ; o mee emee ọ hụ ahụ. A kpọkuola ndị nwere ebe obibi na ọdụ ahịa na gbururgburu ebe dị iche iche n'Awka bụ isi obodo steeti Anambra ka ha kọchasịa ọwà mmiri dị na mpaghara ha, sụchasịakwa ahịhịa toro eto ma debekwa gburugburu ha ọcha; maọbụ ha chee aka hụ ka gọọmenti kpọchiri ebe ahụ.
Ntuziaka a bụ nke e neyere site n'aka onyeisi ụlọ ọrụ 'Awka Capital Territory Development Authority' (ACTDA), bụ Maazị Amaechi Okwuosa n'okwu ya n'Awka, oge ọ na-enye ụfọdụ ndị nwere ebe obibi na ụlọ ahịa na mpaghara ụzọ awara awara ahụ siri Enugu gaa Ọnịtsha akwụkwọ ozi bànyere ntuziaka ahụ.
O chetaara ndị ahụ na ọ bụ ọrụ dịịrị ha idebe gburugburu ha ọcha oge niile, ma kpọkuo ha ka ha na-atụnye ụtụ nke ha n'ịkwàlite ịma mma nke Awka bụ isi obodo steeti ahụ, site n'ime ka mpaghara ha dị iche iche na-eti ka ọnwa oge niile, ya na site n'izèrè ihe ọbụla bụ imetọ gburugburu ha, maka na onye ọbụla nupùrù isi na nke ahụ, ka a ga-akpọchi ụlọ ahịa ya.
N'okwu dịkwa ka ibè ya, ndị okpuru ọchịchị 'Awka South' amalitela ikpochasị na ịkọchasị ọwà mmiri dị iche iche sụchiri asụchi na mpaghara ụzọ 'Zik Avenue', n'ịgbaso atụmatụ idebe gburugburu ọcha, na ime ka mmiri na-agara onwe ya siriri-wèrè.
N'okwu ya bànyere nke ahụ, onye nọ n'isi ya bụ ọrụ ma bụrụkwa onyeisioche nchere oge n'okpuru ọchịchị ahụ, bụ Maazị Leo Nwuba katọrọ otu ndị mmadụ siri were atịtị na ahịhịa sụchisie ọwa mmiri dị iche iche na mpaghara ahụ, bụzị nke na-eme ka mmiri na-emebìsi okporo ụzọ; ma kpọkukwazie ndị bi ebe ahụ ka ha na-edebe gburugburu ha ọcha oge niile, ma kwụsịzie ichè na ọ bụ ọrụ dịịrị gọọmenti.
Ọ dọkwazịrị ha aka na ntị ka onye ọbụla kwụsị ịwunye ahịhịa n'ọwà mmiri, ma na-esonyesikwa ike n'amụmà ọrụ mkpocha na nzacha ahụ a na-eme kwà ọnwa ọbụla, n'ihi na onye ọbụla erubeghị isi nye nke ahụ, ka a ga-eji usoro iwu wee gwọọ ji mmanụ.